रविन्द्र मिश्रको कडा जवाफ: निर्मलाका परिवारलाई भेटेर दिए यस्तो सुझाव (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
जगदिश गिरी महेन्द्रनगर: बलात्कार पछि हत्या गरिएकी भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखामकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको परिवारलाई आज विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले भेटेका छन् । विवेकशील साझाका अन्य नेताका साथमा अएका मिश्रले अहिले सम्म अपराधी पक्राउ पर्न नसक्नु दुखद भएको बताए ।
निर्मलाको न्यायका लागि सिंगो देशनै लागि लागि परेको छ , घटनाका दोषी उम्किन नपाउन् भनेर आफुहरु पनि लागि परेकाञे छौं । कहाँ कस्तो सहयोग चाँहिन्छ त्यहाँ आफुहरु पनि गर्न तयार रहेको बताए । उनले मृतकका आमाबुबा दुर्गा देवि पन्त र यज्ञराज पन्त लाई मन जसरी दरो बनाएर लागि पर्नुभएको छ त्यसरिनै लागि पर्नुस् मनलाई कमजोर नबनाउन भने ।
मिश्रले निर्मलाका आमाबुबालाई अबका दिनमा बलात्कृत एक निर्मलाका लागि मात्र नभएर सयौं निर्मलाका लागि न्यायिक लडाइ लड्नु पर्ने बताए । सरकारले यसरी गैरजिम्मेवारी पन देखाउन नहुने बताए । सरकारको चौतर्फीक आलोचना भइरहेका बेला मिश्रले पनि सरकारले दोषीलाई उम्काउन तर्फ लागेको संकेत गरे । “प्रधानमन्त्री ओलीले अपराधी १२ बर्षपछि पक्राउ पर्न सक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति लज्जास्पद रहेको छ”।
देशको जिम्मेवार व्यक्तीले गैरजिम्मेवारीपन देखाउनु दुखद भएकोे उनले बताए” । गत ११ साउनमा होमवर्क गर्न साथीको घर गएकी निर्मला पन्तको शब भोली पल्ट नजिकैको उखुबारीमा बलात्कार पछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । बलात्कार पछि हत्या गरिएकी पन्तका हत्यारा अझै सम्म पक्रउ पर्न सकेका छैनन्। भिडियो हेर्नूहोस।
Prevगरिब बाबुआमाको जिन्दगी नै बदलिदिए यी ७ वर्षीय बालकले गरे यस्तो चमत्कार (हेर्नुहोस् भिडियो)
Nextऋषि धमलाको चलचित्र ‘अनुराग’ हेर्न गएका रवि लामिछाने हल छिर्नु अघि सबैले यसरी घेरेपछि– हेर्नुहोस् भिडियो सहित
कोʼरोनालाई पराजित गरेको न्युयोर्कमा रहेका नेपाली परिवारको कथा- ‘हामीले जित्यौं, कोरोʼनाले हार्यो’ [सबैले पढ्नुʼहोस]
दीपाको मोबाईलमा दीपकको नाम यस्तो ? विबाह अघि नै दीपाले शुभकामना दिँदा प्रियकाको उत्तर के ? (भिडियो सहित)
खुसि हुदै रुदै यसरि शृंखला आइन लाइभ, सुनाइन नेपालीहरुलाई खुसीको खबर-हेर्नुहोस ( भिडियो सहित )